Inona ny atiny tohanan'ny? Ahoana no ahafahanao manatsara ny soso-kevitra momba ny atiny ho an'ny fanatsarana ny tsindry Click-Through? | Martech Zone
Inona ny atiny tohanan'ny? Ahoana no ahafahanao manatsara ny soso-kevitra momba ny atiny momba ny vidin'ny tsindry Click-Through?
Alatsinainy, Novambra 24, 2014 Alatsinainy, Novambra 24, 2014 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fampiroboroboana ny tranonkalantsika sy ny fanitarana ny tratranay dia amin'ny alàlan'ny fampiasana atiny tohana. Nanomboka nampiasa mpivarotra iray izahay fa rehefa tsy nahy nampandeha ny fampiroboroboana $ 10k fanampiny izy ireo - ary avy eo nampiditra anay ho amin'izany ary nitaky ny handoavanay azy ireo - niantso anay izahay. Nifindra tany Taboola ary nanana valiny tsara kokoa aza miaraka amin'ny fotoana azo zarazaraina ho an'ny firenena ny mpihaino antsika (miaraka amin'ny vidiny azo avy amin'ny click-through).
Misy atiny maherin'ny 5M atolotra ankehitriny amin'ny alàlan'ny sehatray hahitana ny atiny, ary marika an'arivony maro manao fampielezan-kevitra atiny. Rariny raha milaza isika fa nahita tsara azy rehetra, ary teny an-dàlana dia nahalala zavatra iray na roa momba ny antony mahatonga ny olona hanindry sy hirotsaka hamaky ny sehatray. Taboola
Inona no atiny tohanan'ny
Misavoritaka ny toeram-pivarotana maro teratany dokam-barotra ary fanentanana votoaty tohanan'ny. Hafa mihitsy ny atiny tohana, mazàna ny atiny misy atiny ambanin'ny lahatsoratra navoaka izay misy lahatsoratra mifandraika amin'ny lohahevitra. Ilay orinasan-tranonkala mpanohana, toa an'i Taboola, dia mandinika ny atiny navoaka mba hamokarana ny lalao tsara indrindra hahatratrarana ny tahan'ny click-through ambony. Mino aho fa ny tanjaka lehibe ateraky ny atiny mpanohana dia ny fahafahany mampiharihary ny atiny.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny tahan'ny Click-Through amin'ny atiny tohanan'ny
Taboola dia nanambatra an'ity sary ity mba hanampiana anao hanatsara ny atiny tohanan'ny fanohanan - manomboka amin'ny fanoratana ny mari-pamantarana ny lohateny na ny sary kely na sary asongadinao. Ny fampiasana verbiage fihetsika izay natokana ho an'ny mpihaino anao sy ireo sary manankarena hita maso toa tsara amin'ny endrika kely dia manakiana.
Tags: votoaty voohanataboola
Lahatsary: ​​Mandrosoa antsasak'adiny ny fivarotana ecommerce anao